Resabe… ! | NewsMada
Par Taratra sur 31/05/2019
Iza indray ny antoko na vondron’antoko hahazo ny maro an’isa etsy Tsimbazaza ?
Izany izao no mitana ny sain’ny maro na dia vitsy dia vitsy aza ireo tonga nifidy, ny alatsinainy teo. Mazava aloha ny resaka eto e. Leo sy tofoka ireo mpanao politika ny vahoaka. Inona moa no ataony eo fa dia mitady foana izay hamenoana ny paosiny fotsiny. Lainga izany hoe hiaro ny tombontsoan’ny vahoaka izany. Mody miady avy eo mifandamina dia izay foana no ataony eo. Tsy te hanome ny vatony hangalarana sy hanaovana izao rehetra izao intsony ny mpifidy. Kanefa moa dia inona no vokany. Tsy maintsy hisy olona 151 hotompoina ihany eo. Manangan-tanana dia mahazo volabe. Ny karama sy ny hafa rehetra. Tsy ho menatra izany izy ireo na vato roanjato aza dia nahalany azy. Izay no demokrasia e. Inona ary no atao?
Tsy misy vahaolana aloha hatreto satria misy tokoa ilay atao hoe lalam-panorenana e. Eo koa ny tsindry avy amin’ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombon’antoka teknika.
Tsy maintsy atao ny fifidianana na efa tsy mila izany ny Malagasy maro an’isa. Noho izany, ny mpitondra izao no tsy maintsy maneho ny fahombiazana. Izay ihany sisa no mba hany azo antenain’ireo valala tsy mandany harona. Mbola ho diso fanantenana indray ve?
Efa nampiseho kosa ny mpifidy malagasy fa rehefa tsy tiany dia omeny ny sahaza azy. Lesona tsara horaisina izay. Tsara ny fampanantenana miavosa. Rehefa misy ny tanteraka dia izay no izy.
Ny olana eto maro be ka ilaina ny mamaha azy isan’andro. Izay no ilaina ny mpitondra. Fa tsy hoe hiseho ivelany fotsiny. Jereo anie fa mitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana. Efa nisy fepetra hanafoanana izany ve sa miteny fotsiny hoe izao no izy? Miandry fa gasy o. Dia tsy misy azo atao ve mba hanatsarana izao fiainana izao? Alao hery ary tompoko.